Porto Rico: Adihevitra momba ny sivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2009 8:34 GMT
Peta-drindrina manohitra ny sivana, navoakan'i Andréia tao amin'ny Flickr
Ny Ministeran'ny Fampianaran’ny governemantan'i Porto Rico dia nanala boky dimy amin'ny fandaharam-pianaran'ny taona faha-11 ao amin'ny rafi-pampianaran'ny sekolim-panjakana: Antología personal, nosoratan'i José Luis González; El entierro de Cortijo, nosoratan'i Edgardo Rodríguez Juliá; Mejor te lo cuento: antología personal, nosoratan'i Juan Antonio Ramos; Reunión de espejos, fantina fanadramana navoakan'i José Luis Vega (Puerto Rican ireo mpanoratra rehetra); ary Aura, nosoratan'i Carlos Fuentes avy any Meksika. Nentin'ny masoivohom-panjakana ho fanamarinana ity hetsika nataony ity ny filazana fa hoe “nahitana fomba fiteny sy voambolana tsy azo ekena, izay tena manompa sy tsy mahalala fomba” ireo boky.
Ny governoran'i Porto Rico, Luis Fortuño, dia nanohana ilay fanapahan-kevitra: “Mieritreritra aho fa nazava tsara ny teniko, ary ireo ray aman-dreny rehetra dia mahazo tsara fa ireo boky azo vakian'ny olona feno 18 taona dia tsy tokony hovakian'ny olona 12 taona.” Maro ireo mpanoratra sy mpanakanto any Porto Rico no naneho ankarihary ireo olan-dry zareo ary nitsara ny fanapahan-kevitry ny governemanta ho sivana. Manameloka ilay fanapahan-kevitra koa ny Federasionan'ny mpampianatra ary milaza fa “mampiseho ny tsy fahalalana momba ny zava-misy ara-tsosialy iainan'ireo mpianatsika izany, sy fijery ambany ny literatiora maoderina ho ampahany amin'ny lamin'asa akademika.” Taorian'ny tsindry hazolena natao ny vahoaka tahaka izany dia niteny ny Ministeran'ny Fampianarana fa boky iray monja no notsoahin-dry zareo mandritra ny fotoana maharitra, fa mbola dinihana kosa ny amin'ireo ambiny.
Ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety ao Porto Rico dia nanome tànana an'ireo mpanoratra, mpampianatra ary mpanakanto amin'ny fanoherana nanoloana ny Ministeran'ny Fampianarana tany Hato Rey, toerana izay namakian-dry zareo ampahany amin'ireo boky notsoahina. Nisy horonantsarin'ny fanehoana ny fanoherana ilay fanatsoahana boky amin'ny rafi-pampianarana ho an'ny sekolim-panjakana navoaka tamin'ny YouTube.
Nanao tsikera mamaivay koa ireo mpitoraka blaogy. Niteny ilay mpanoratra Mayra Santos Febres ao amin'ny Lugarmanigua [ES]:
Matahotra ny sivana aho, indrindra rehefa ny “fampiofanana feno ireo zanatsika sy tanorantsika” no atao fialan-tsiny mba hibahanana azy ireo tsy hanam-pifandraisana sy traikefa, dia ireo boky izay mety hanampy azy ireo hampitombo ny fahaiza-mandalin-javatra. Tokony anatina foto-dresaka misokatra no atao ny dinika, tsy asiana vavahady vy na “tsy azo idirana”. Sarotra ny mieritreritra fa izany no fandanjalanjan-kevitra, raha hatramin'ny voalohany dia efa fafàna ireo hevitra samihafa. Marina fa ny fanabeazana dia mila mijery ny fahafahan'ny tanora sy ny ankizy mahazo sy mitsakosako ny vaovao azony. Tsy ndeha hanome hena mendy amina zaza efa-bolana mbola tsy misy nify ianao. Nefa amin'ny taonan'ny ankizy any amin'ny taona faha-11 any amin'ny sekolim-panjakanan'ny firenentsika, efa maro ny nifin'izy ireny. Manana nify izy, hoho, ary fandrangotana. Ny sasany amin'izy ireny aza dia efa manan-janaka efa-bolana. Afaka mihinana hena nendasina ry zareo.
Ilay mpitsara lasa mpitoraka blaogy tsy ela akory izao, Dora Nevares-Muñiz dia nandinika ny fifanoherana amina fomba fijery araka ny lalàna:
Ny fanalàn'ny Ministeran'ny Fampianarana ireo lahatsoratra (literatiora) dia tsy manaraka ny lalàmpanorenana ary mandika ny zon'ny mpianatra izany… Tsy vitan'ny mangeja ny fahalalahan'ny fanehoan-kevitra sy ny fahalalahana miteny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenantsika ny sivana, fa sady herisetra ataon'ny fahefana mpanatanteraka amin'ireo mpianatra izay manan-jo hahazo fanabeazana feno izay hitondra azy ireo any amin'ny fahafahan'izy ireo maneho ny maha-izy azy sy ny fahafantarana ireo zo sy fahalalahan'izy ireo. Ny fanaovana sivana dia manohitra ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra, izay fahita any amin'ireo fitondràna tsy mahay mandefitra (jadona) sy tsy refesi-mandidy.
Tsy tokony hanana toerana eo amin'ny rafi-pampianarana ny sivana. Tokony ho iray amin'ireo tanjon'ny rafi-pampianarana ny fananan'ireo mpianatra fandeferana sy fanajàna manoloana ny fahasamihafana sy ireo olona tsy mitovy hevitra aminy. Izany dia iray amin'ireo dingana voalohany hisorohana ny herisetra. Boky efa famakin'ireo taona faha-11 ireo nitsoahina. Izy ireo koa dia boky malaza any Porto Rico sy ireo firenen-kafa noho ny kalitaon'izy ireo ara-literatiora. Tokony hanana ny fahaiza-mandinika sy fahaiza-misaina ilaina ny mpianatra any amin'ny lisea (lyçée) iray vao afaka mandinika ireo boky ireo.
Ao amin'ny blaoginy Lecturas urbanas [ES], Javier Valentín Feliciano dia mahatsiahy ny zava-niainany tamin'ny rafi-pampianaran'ny sekolim-panjakana tany Porto Rico:
Tsy mbola namaky na iray aza tamin'ny bokin'ireny mpanoratra Porto Rican ireny aho nandritra ny 12 taona nianarako tamin'ny rafi-mpampianaran'ny sekolim-panjakana. Tsy mbola namaky bokin'ireo mpanoratra hispano-amerikana miteny espaniola avy any Amerika izay tonga teny amin'ny fara-tampony aho, toa an-dry Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes [iray amin'ireo mpanoratra notsoahina], Mario Vargas Llosa, Luis Valenzuela; lava ny lisitra. Nila niandry an-taonany maro aho izay vao afaka nandray ny tenako ho hispano-amerikana miaraka amin'ireo mpanoratra ireo. Tsy mbola namaky azy ireo mihitsy aho fony tany am-pianarana; tsy tafiditra mihitsy izy ireny. Iza no mahalala na mety tsy nahita azy ireny mihitsy aho?
*Ireo lahatsoratry ny mpitoraka blaogy dia nanaovan'ny mpanoratra dikateny. Ny sary dia avy amin'ny rakitsarin'i Andréia's ao amin'ny Flickr ary navoaka mampiasa ny Creative Commons licence.